भ्यालेन्टाइन डेटिङअघि गुप्तांग ठूलो बनाउन भन्दै स्टिलको रिंगभित्र छिराएपछि… – Online Nepalaja
February 17, 2021 148
भ्यालेन्टाइन डेका दिन एक महिलासँग भेट्दा आफ्नो गु’प्तां ग ठू लो होस् भन्ने चाहनाले एक युवकले आफ्नो गु प्तां गलाई स्टि लको रिं गभित्र छि राए । तर, यसो गर्दा उनको गोप्य अंग २ दिनसम्म ख’त’ रनाक तरिकाले सुन्निएपछि उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपरेको छ । द सनको रिपोर्टअनुसार थाइल्याण्डको राजधानी बैंककका यी युवाले डाक्टरहरुसँग आफूले आइतबार एक महिलालाई भेट्ने तय भएको र आफूले उनलाई प्रभावित पार्न चाहेको बताएका छन् ।
युवकका अनुसार उनले अं गमा रगतको दबाब बढाएर ठू लो र क डा बनाउन रिं ग प्रयोग गर्न सकिने कुरा सुनेका थिए । त्यसैले उनले आफ्नो टुलबक्समा रहेको ३ सेन्टिमिटर फराकिलो रिं’गमा ते ल प्रयोग गरेर आफ्नो गु’प्तां’ग छि’रा’ ए । तर, भोलिपल्ट उनको गु प्तां ग निकै पी’ डा’ दा यी तरिकाले सुन्नियो र उनले रिंग निकाल्न सकेनन् । शुक्रबार बिहानदेखि रिंग उनको अंगमा अ’ड्कि’ एको थियो र शनिबार अपरान्हसम्म उनले यसलाई निकाल्न नसकेपछि इ म र जेन्सीमा फोन गरेका थिए । उनले उद्धारकर्ताहरुसँग भने ‘मेरो अंग नै का ट्नु पर्छ कि भनेर म निकै ड’रा’इ’रहेको थिएँ । यो निकै सु न्नि एको थियो र मलाई त फुट्छजस्तो लागेको थियो । ’ रिंग का’टे र उनलाई बचाउन उद्धारकर्ताहरुलाई पूरा ६० मिनेट लागेको थियो । उनलाई केही एन्टिबायोटिक्स र सुन्निने घटाउने क्रिम दिइएको छ । उद्धारकर्ताका अनुसार ती युवक एक घण्टा लामो रिंग काट्ने प्रक्रियाका क्रममा पीडाले रोएका थिए ।
तेस्तै प्रेम आफैँमा एउटा रङ्गीन अनुभूति हो। कसैसँग प्रेमको कल्पना गर्दा मात्र पनि शरीरमा अर्कै तरङ्ग सञ्चार हुन्छ। त्यसमाथि युवा मन, प्रणय चिन्तनले तरङ्गीत बनाउने नै भयो। प्रणय दिवसले प्रत्येक वर्ष संसारका हरेक युवा युवतीको मनमा यस्तै तरङ्ग सृजना गर्छ। मनमा उत्पन्न भएको तरङ्गलाई आफ्नो मनले खाएकोलाई अभिव्यक्त गर्ने दिन नै हो प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेटाइन डे! यो दिनले धेरै मनबीचको पर्खाल भत्काउँछ। सीमारेखाहरू मेटाउँछ र दुई मुटुलाई एक गराउँछ। सुन्दर नयाँ संसारको सपना देखाउँछ। १४ फेब्रुअरीको दिनले दैनिक जिन्दगीमा कसैलाई तनाब त कसैलाई थप उत्साह सृजना गर्नसक्छ। किनकि, त्यस दिन परिवार, साथीभाई, आफन्त, प्रेमी/प्रेमिकाका साथ भ्यालेन्टाइन डे कसरी मनाउने भन्ने कुराले सताउन सक्छ। आउनुस्, यस दिवसलाई तनावमुक्त पारौं यी टिप्सहरु जम्मा पारेर।
भ्यालेन्टाइन डे मा के गर्ने? : आफ्नो मायालाई उत्साहका साथ प्रकट गर्नुहोस्। भ्यालेन्टाइन डे एउटा विषेश दिन हो जुन दिन आफ्नो प्रेमलाई उत्साहका साथ प्रकट गरिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमको सफलतामा खुशी प्रकट गर्दै भविस्यमा अझै गाढा माया बसोस् भनी कामना गर्ने पनि यही भ्यालेन्टाइन डे हो। त्यस्तै मायाको गोरेटोमा हिँड्दा ती विशेष दिनहरू, क्षणहरू तथा घटनाहरू जसले हसायो, सायद रुवाएको पनि हुनसक्छ, ती प्रत्येक हाँसो र रूवाईहरू जसले आफ्नो मायाको डोरीलाई कस्न प्रोत्साहन गर्‍यो, त्यसलाई सम्झने दिन पनि भ्यालेन्टाइन डे नै हो।
यस दिन पुराना फोटोहरू हेर्ने, ईमेल, टेक्सहरू पढ्ने र विगतलाई सम्झना गर्दै आपसमा कुरा गर्नाले यस दिनमा विशेष मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाबीच मात्र नभएर माया प्रेम गर्ने सबै आफन्तजनका बिच यसरी नै स्मरण गरी तथा ब्यक्त गरी भ्यालेन्टाइन डे मनाउन सकिन्छ। मितब्ययी बन्नुहोस् : अब कुरा पैसामा आयो। भ्यालेन्टाइन डेको आगमन सँगै बजेटको कमीले तनाब हुनसक्छ। यसका लागि उपाय छ। भ्यालेन्टाइन डे घर बाहिर होटल, पार्क, रेस्टुरेन्ट आदिमै मनाउनुपर्छ भन्ने छैन। यस दिन धुमधामले खर्च गरे मात्र प्रेममा सफल भइने पनि होईन। यसका लागि आफ्नै घरमा रमाइलोका साथ मनाउन सकिन्छ।
आफ्नो मेहनत, जाँगर र भावनालाई तपाईको प्रेमी प्रेमिका वा साथी भाइले प्रसंशा गर्ने छन् जब तपाईँ आफ्नै हातले पकाएको खाना सर्भ गर्नुहुन्छ। यसै अवसरमा सक्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीको लागि केहि विषेश कविता लेख्नुहोस्। गीत गाउन सक्नुहुन्छ भने रोमान्टिक गीत गाएर सुनाउनुस्, वा उनले मन पराउने कुनै गीत संगीत गाएर हेर्नुहोस्। त्यस्तै सिनेमा हेर्ने भ्याईएन भने आफ्नो साथीले मन पराउने सिनेमा हेर्ने योजना बनाउनुहोस्। घरैमा गरिने यस्ता साना साना कार्यक्रमले तपाईँको भेलाईन्टाइन डेले विशेष र अविश्मरणीय दिन बनाउनेछ। यसबाट घर परिवार्, साथी भाइ सबै प्रशन्न हुनेछन् भने अर्कोतर्फ मितब्ययी हुने बानीको विकास हुनेछ।
Prevआजकै दिन भएको थियो श्रीकृष्णको नि’धन, स्वेताले लेखिन् भावुक स्टाटस
Nextमेकअपका कारण सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल र मजाकको पात्र बनेकी सुष्मालाई पर्यो यस्तो आपत !
अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् ?
सुस्मिताको कोठामा यस्तो भेटियो, आमाको मोबाईलबाट खिचेको भिडियो, रुँदै हेरिन् छोरीको सामान (हेर्नुहोस भिडियो)
डान्सर नोराको टिकटक भिडियोले छोटो समयमै पायो ६३ मिलियन भ्यूज (भिडियोसहित)